Celtic dia Sehatra fitantanana famoronana (CMP) amin'ny famoronana, fiaraha-miasa ary fanamafisana ny dokam-barotra nomerika. Ekipa mpamorona, haino aman-jery, marketing, ary masoivoho no manana toerana iray handanjalanjana ny fampielezan-kevitra sy ny famoronana mavitrika manomboka amin'ny kitapo manerantany mankany amin'ny media eo an-toerana. Vokatr'izany, ny marika dia afaka manapaka ny fotoana famokarana ary mampihena be ny lesoka.
Refesina io - Manangona angon-drakitra famoronana manerana ny fantsona hitondrana angona fampisehoana amin'ny ekipa mpamorona ary hanome angona famoronana ho an'ny ekipa media. Ny sehatra dia manana metrise fampiratiana sy horonan-tsary mahazatra, mpanangana tatitra ary sary amin'ny alàlan'ny dashboard. Misy ihany koa ny fanondranana na tatitra API ho fampiraisana ny valin'ny fahombiazana.
Tags: famoronana dokafamoronana dokam-barotraCelticCmpinona ny cmp